देशभर पहिरो र बाढिका कारण ११ जनाको ज्यान गयो, कहाँ के भयो? – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर देशभर पहिरो र बाढिका कारण ११ जनाको ज्यान गयो, कहाँ के भयो?
देशभर पहिरो र बाढिका कारण ११ जनाको ज्यान गयो, कहाँ के भयो?
बिहीबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका सबै स्थानमा जनजीवन प्रभावित बनेको छ । काठमाडौंमा ३ जनाको मृत्यु भएसँगै वर्षाका कारण मुलुकभर मृत्यु हुनेको संख्या ११ जना पुगेको छ ।हालसम्म रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, भोजपुर, ललितपुर, मकवानपुर र पर्सामा गरी ११ जनाले जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको् प्रारम्भीक तथ्याङकले बताएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका अनुसार बनेपा-३, नालामा भूकम्प पीडितको घरमाथि पहिरो खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते छन् । मृत्यु हुनेमा ५५ वर्षीया गोमा दंगाल र ७ वर्षीय सोहनी दंगाल छन् ।घटनामा बुहारी ३० वर्षीया शुशिला र तीन महिने नातिनी अनुश्का घाइते छन् ।
पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा बाढीले बगाएर एक बालकको मृत्यु भएको छ । पर्सागढी नगरपालिका वडा नं १ बस्ने १० बर्षका निखिल पटेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सिंग्याही खोलामा आएको बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा संकलन गरिरहेका उनलाई बाढीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।